Genghiskhan အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Genghiskhan အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
Genghiskhan အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၀၇:၁၁ ၀၇:၁၁၊ ၁၈ မတ် ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၅၈‎ အသစ် ကဏ္ဍ:ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီပုထိုးများ ‎ "Category:ဗီယက်နမ်နိ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်
၀၁:၅၆ ၀၁:၅၆၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၄၇‎ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Ninjastrikers ‎ →‎A Barnstar for you!
၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀
၀၂:၅၈ ၀၂:၅၈၊ ၁၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၇၀‎ အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:ဇာမဏီ ‎No edit summary
၁၃ ဇွန် ၂၀၁၀
၀၃:၁၇ ၀၃:၁၇၊ ၁၃ ဇွန် ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃‎ အသစ် အသုံးပြုသူ:Genghiskhan ‎ စာမျက်နှာအသစ်: en:User:Genghiskhan လက်ရှိ
၀၃:၁၇ ၀၃:၁၇၊ ၁၃ ဇွန် ၂၀၁၀ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၄၇၅‎ အသစ် အသုံးပြုသူ ဆွေးနွေးချက်:Lionslayer ‎ စာမျက်နှာအသစ်: ==Request for help== Hello! I amaVietnamese wikipedian who translated many Burmese articles into Vietnamese (states, cities, airports, pagodas) to introduc...
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/Genghiskhan" မှ ရယူရန်